March 2019 - Nanmalgyi
March 31, 2019 Yuki 0
အောင်လအန်ဆန်းဟာ ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီးအောင်မြင်မှုရထားတဲ့ လက်ဝှေ့သမားကောင်းတစ်ဦးဖြစ်သလို လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုထိုးသတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ထိုးသတ်သွားခဲ့တဲ့ ဂျပန်လက်ဝှေ့ကျော် ဟဆဲ့ဂါဝါနဲ့ ထိုးသတ်ပွဲအတွက် အောင်လက အင်တာဗျူးတွေဖြေခဲ့ရာမှာ နှစ်ချီတည်းနဲ့ထိုးသတ်သွားမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ အောင်လကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေက အောင်လရဲ့အစွမ်းအစကို ယုံကြည်ကြပေမယ့်လည်း ဟဆဲ့ဂါဝါရဲ့ ဟန်ပန်ကိုကြည့်ပြီး နှစ်ချီထဲနဲ့ သိပ်ပစ်ဖို့ရာခက်ခဲမယ်လို့ဝေဖန်နေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိသလို အောင်လပြောတာ လွန်များသွားသလားလို့ […]
မတ်လ ၃၀ရက်နေ့က မြန်မာပလာဇာမှာ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့တဲ့ AYA X Sai Sai ပွဲကို ပရိသတ် သုံးထောင်ကျော်လာရောက်ပြီး April 10ရက်နေ့ စိုင်းစိုင်း birthday showအတွက် လက်မှတ်လာရောက်တန်းစီဝယ်ယူခဲ့ကြတာ တကယ့်ကို စံချိန်တင်ရောင်းချမှုကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာရော စိုင်းစိုင်းအနေနဲ့ ဘယ်လိုခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေလဲ။ Showပွဲနေ့အတွက်ရော ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲဆိုတာ […]
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ထာဝရအသက်ရရှိထားတဲ့ သတ္တဝါများ
March 30, 2019 Yuki 0
1. Koi ဆိုတဲ့ ငါးတွေကတော့ ရွှေဝါငါးကြင်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။တကယ်တော့ ဒီကိုရောက်နေတာ မျိုးစပ်တွေဖြစ်ပြီး မူရင်း Koi ငါးတွေကတော့ အစာအိမ်မရှိပါဘူး။ဂျပန်တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းတွေ ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ ငါးတွေလို့ ဆိုကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အရမ်းကို မွေးမြူကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ သက်တမ်းက 225 နှစ်လောက်ထိ အသက်ရှည်တတ်ကြပါတယ်။ 2. လိပ်ကြီးတွေကို […]
အချိန်မရွေး ကြိုက်သလောက်စားနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေ
သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အစားအသောက်ဖယားမှာ သင်ဟာအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကို စားချင်လျက်နဲ့ရှောင်နေခဲ့ရတဲ့အကြိမ်ပေါင်းမနည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်တိုင်း ရေခဲသေတ္တာထဲ ဘာများရှိလိမ့်မလဲ စပ်စုကြည့်ရင်း စားချင်စိတ်ကို အထပ်ထပ်မြိုသိပ်ခဲ့ပေါင်းလည်း နည်းမယ်မထင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကယ်လိုရီပမာဏအနည်းငယ်သာပါဝင်ပြီး ၀ိတ်တက်မှာစိုးရိမ်စရာမလိုတဲ့ အရသာရှိတဲ့ အစားအစာတွေ၊အသီးအရွက်တွေ အများအပြားရှိပါသေးတယ်။ဆိုတော့ စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပဲ စိတ်လွတ်လက်လွတ်စားနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေက ဘာတွေများလဲ 1.မုန်ညင်းရွက် မုန်ညင်းရဲ့95%ဟာ ရေဓာတ်ဖြစ်တာကြောင့် နေ့စဉ်သင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ Vitamin K […]
ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်က Mount Everest တောင်လို့အားလုံးကထင်မှတ်ထားကြပြီး ကိုယ်တွေရှင်သန်နေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုသန့်စင်လန်းဆန်းတဲ့ရေတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတယ်လို့ထင်ထားကြတယ်ဟုတ်!တကယ်တော့ ကမ္ဘာကြီးက ကိုယ်တွေထင်ထားတာထက်ဆန်းကြယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။အမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုယ်တွေမထင်ထားတဲ့အံ့သြစရာတွေအဖြစ်အပျက်တွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုရင်… ၁။ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးဘုရားကျောင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာရှေးအကျဆုံးဘုရားကျောင်းဆိုရင် Gobekli ဘုရားကျောင်းလို့ လူတော်တော်များများကသိကြပါတယ်။ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေက ဒီဘုရားကျောင်းကို ကြီးမားတဲ့ကျောက်တိုင်ကြီးတွေနဲ့ ရှေးရှေးတုန်းကကျွမ်းကျင်ဗိသုကာပညာရှင်တွေတည်ဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချို့သောအသေးစိတ်လေ့လာသူတွေရဲ့ အဆိုအရ တူရကီတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ကျောက်တိုင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၁၂၀၀၀ တည်းကရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပိရမစ်ထက် နှစ်ပေါင်း […]
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက ထူးဆန်းမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာသတိထားမိကြရဲ့လား။ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းတွေကလည်း ဆန်းကြယ်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ပြည့်နေပြီး ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေကလည်းဆန်းနေရော။မသိရောမသိချင်ကြဘူးလား ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းလှုပ်ရှားမှုတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာ!အခုပြောပြမယ့်အချက်လေးတွေကိုဖတ်ပြီးရင် ဒီထက်ပိုပြီးသိချင်သွားမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ကြည့်လိုက်ရအောင် ၁။သင့်ရဲ့ ဘ၀သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ နှလုံးဟာ နှလုံးအပြင်ဘက်ကသွေးလီတာပေါင်းများစွာကို အကြိမ်ရေသန်း၂၀၀နီးပါးစုပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါက သင့်ရဲ့နှလုံးသားကိုအမြဲတမ်းဘာလှို့ဂရုစိုက်နေတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ၂။သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲက လျှပ်စီးကြောင်းတွေလှုပ်ရှားပြေးလွှားတဲ့အခါမှာ အချက်ပြမီးသီးတစ်လုံးလိုလင်းသွားစေပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါကလည်း ဦးနှောက်ကိုစဉ်းစားအသုံးပြုတဲ့လူတွေမှာသာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၃။ငါးမန်းတစ်ကောင်ရဲ့သွားတွေဟာ လူသားတွေရဲ့သွားတွေထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးသန်မာပါတယ်။ ၄။အစာအိမ်ထဲကအက်စစ်ဓာတ်ဟာ အရေပြားထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူအပေါက်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။XENOMORPHS လိုမျိုးပေါ့။ The Prometheus […]
လက်တွေ့ဘဝမှာ ဆင်းရဲလွန်းတဲ့ နပန်းချန်ပီယံများ
တခါတလေမှာ လူတွေဟာ သူတို့ထင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့အရာက လုံးဝကို လွဲချော်နေတာရှိပါတယ်။အရမ်ိးကု နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ WWE WWF တို့လို ပွဲတွေက နပန်းသမားကြီးတွေကို ကျိကျိတက် ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ ထင်မှတ်မထားအောင် အံ့သြစရာကောင်းပြီး တကယ့်ကို ဆင်းရဲနေတဲ့ နပန်းသမားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Perry Saturn Perry Saturn […]
သေခြင်းတရားဆိုတာ ဘယ်အချိန်၊ဘယ်နေရာဆိုပြီးကြိုတင်သိထားလို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်ပါဘူး။ပန်းခြံသွားနေရင်း၊လမ်းလျှောက်ရင်း သေသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်သလို ထီပေါက်ပြီးမှ သေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။သေသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပုံစံအမျိုးမျိုး၊နည်းအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာမှ ထူးဆန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့သေခြင်းတရားမျိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့လူ ၈ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ပါဦး။ (၁)အသားစားငါးတွေကြောင့်သေခဲ့ရတဲ့အမျိုးသား ၂၀၁၁၊ဘော်လီဗီယာနိုင်ငံ၊Rosario Del Yata မှာနေထိုင်တဲ့အသက် ၁၈နှစ်အရွယ်ကောင်လေးက လှေစီးနေရင်း အရက်ကလည်းမူးနေတာကြောင့် လှေပေါ်ကနေရေကန်ထဲကိုခုန်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲပပါတယ်။ကံဆိုးစွာနဲ့ သူခုန်ချတဲ့အချိန်မှာပဲ အသားစားငါးတွေဝိုင်းအုံလာပြီးကိုက်ဖြတ်စားသောက်ခံလိုက်ရပါတယ်။စုံစမ်းချက်တွေအရ သူက ငါးဖမ်းသမားတစ်ယောက်လို့လည်းသိရပါတယ်။အသားစားငါးတွေက ပုံမှန်အားဖြင့် သေးငယ်တဲ့သတ္တ၀ါအရှင်လေးတွေကိုစားလေ့ရှိပါတယ်။ လူကိုစားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ တကယ့်ကိုထူးဆန်းရှားပါးပါပဲ။ထိုကောင်လေးကတော့ကံဆိုးစွာနဲ့အစားခံလိုက်ရတာပါ။ […]
ကျွန်တော်တို့ဟာ အကောင်းတွေကို အဆိုးတွေက ဖုံးသွားတတ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ နေထိုင်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပင်ဖြစ်နေစေကာမူ ကြင်နာပြီး သူရဲကောင်းဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေကိုတော့ သတိမထားမိဘဲ ဖြစ်မသွားရအောင် ကျွန်တော်တို့က တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း လူပေါင်းများစွာဟာ သူတို့ကမ္ဘာကြီးကို ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပန်းတိုင်ဟာ အနည်းဆုံး သူတို့ထဲကတချို့နဲ့ သင့်ကို အသိအကျွမ်းဖြစ်သွားဖို့ပါ။သတ္တိတို့ […]
မျက်ကွင်းရာတွေကို အလွယ်တကူဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် အိမ်သုံးနည်းလမ်းတွေ
မျက်လုံးအောက်က မျက်ကွင်းရာတွေဟာ အများလိုလို ကြုံနေရတယ့် ပြသနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်း များစွာရှိသလို ဖယ်ရှားနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေလည်း အများအပြားပါပဲ။ဒါကြောင့် အချိန်မှန်အိပ်၊အချိန်မှန်စားသင့်တဲ့အပြင် သင့်ရဲ့မျက်လုံးတွေတလက်လက်တောက်ပနေစေမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့အိမ်သုံးနည်းလမ်းအချို့ကို အခုပဲဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ 1.Potato Juice အာလူးမှာ အသားအရေဖြူစေတဲ့ သဘာပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဗီတာမင်စီ ပါဝင်တာကြောင့်အာလူးကိုကြိတ်ပြီး အာလူးရည်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပါ။အာလူးရည်ထဲကိုနှစ်ထားတဲ့ cotton padကို မျက်လုံးပေါ်တွင် 10မိနစ်ခန့်ကပ်ထားပြီး မျက်နှာကိုဆေးလိုက်ပါ။နောက် […]